ManarakaMapa | Ny toeram-piasana amin'ny ho avy dia hybrid an'ny mpiasa lavitra sy amin'ny birao
Zava-niseho mivantana & fialam-boly
Hatramin'ny 31 desambra ny fianarantsika dia 50% no tapaka. Hividy izao
Ny toeram-piasana amin'ny ho avy dia hybrid an'ny mpiasa lavitra sy amin'ny birao
Oktobra 8, 2020
Nandre resaka be momba ny 'normal vaovao' hatramin'ny niandohan'ny areti-mandringana. Raha ny tena izy dia tsy misy tena mahalala hoe hanao ahoana izany normal vaovao izany.
Amin'izao fotoana izao dia mandalo revolisiona sosialy isika. Ny areti-mandringana dia mahatonga ny mpiasa hamerina hijery ny dikan'ny asa amin'izy ireo tsirairay.
Ny mpampiasa dia nifanaraka tamin'ny asa tamin'ny zava-misy any an-trano haingana. Hitan'izy ireo fa azo atao izany ary mahasoa aza ny fananana mpiasa lavitra.
Talohan'ny Covid19 mpiasa maro no nangataka fampitomboana amin'ny asa lavitra .
Amin'ny tranga maro, ny mpampiasa dia hamaly ny fangatahana asa lavitra milaza fa tsy azo atao izany.
Ankehitriny sy amin'ny ho avy ny zava-misy dia ny asa lavitra no mijanona eto.
Research dia nahita fa ny roa ampahatelon'ny mpiasa nanaovana fanadihadiana dia mahatsapa fa mahomby kokoa amin'ny asa any lavitra. Ny tatitra iray nataon'i Lenovo dia nahatsikaritra fa ny 52% tamin'ireo nanaovana fanadihadiana dia nahatsapa fa ny fiasana an-trano dia ilay 'ara-dalàna vaovao' tokoa.
Ny iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra ho an'ireo mpiasa miasa lavitra dia ny fiatrehana ny fahatapahana an-trano sy ny ara-tsaina fanambin'ny fahasalamana.
Raha ny tena izy ny ara-dalàna vaovao ny toeram-piasana ho avy dia hybrid an'ny mpiasa lavitra sy any amin'ny birao.
Misy ny fahafaha-manao izao ho an'ny mpitarika mba handrafetana paikady sy handrafetana izao izay ho endrik'ilay toeram-piasana hybrid.
Ka ahoana no ahafahan'ny orinasa mikasa ny hiasa amin'ny toeram-piasana hybrid amin'ny zava-misy aorinan'ny areti-mandringana? Ireto misy sosokevitra vitsivitsy:
Ny mpitarika ny orinasa dia manana fotoana izao hanangonana ny fikarohana sy ny angon-drakitra momba ny toetran'ny mpiasan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ny fanadihadiana sy ny fanadihadiana momba ny fahatsapan'ny mpiasa miasa lavitra.
Ho an'ireo orinasa efa manana birao sy mpiasa any am-piasana lavitra dia misy ny fotoana ahafahana manombana ny fandehany. Afaka manangona angon-drakitra anecdotal amin'ny resadresaka iray momba ny zavatra mandeha sy izay tsy mandeha ny mpitarika.
Miaraka amin'ny fiatraikany ara-tsosialy amin'ny valanaretina dia zava-dehibe ny fahatsoran'ny mpitondra amin'ny fihetsiky ny mpiasa tsirairay avy sy ny zava-misy. Ohatra, ny ray aman-dreny miala sasatra amin'ny ray aman-dreny dia mety te-hiasa lavitra amin'ny 60% amin'ny fotoana sy any amin'ny birao 40% amin'ny fotoana. Zava-dehibe ny fanangonana tahirin-kevitra momba ny safidin'ny tsirairay mba hamoronana safidy tsara indrindra ho an'ny mpiasa rehetra.
Ny toeram-piasana hybrid idealy dia tokony handanjalanja ny fifandanjana marina amin'ny fanangonana fivoriana ho an'ny olona mifanohitra amin'ny saika. Ny famoronana fepetra hamaritana ny fanapahan-kevitra manodidina ny fotoana hihaonana mivantana na amin'ny fomba saika hanampy ny olona rehetra ho eo amin'ny pejy iray ihany.
Ny toeram-piasana hybrid dia mitaky fomba vaovao hijerena ny refin'ny fampisehoana. Misy ny fotoana ahafantarana ireo metrika vaovao handrefesana ny fahombiazan'ny mpiasa amin'ny rafitra hybrid. Maminany aho fa miaraka amin'ny AI, angon-drakitra tena izy, fihaonana amin'ny fanadihadiana AI fa hisy angona bebe kokoa hahafantarana ny fahombiazan'ny mpiasa. Na izany aza ny fandrefesana ny haitao amin'ny teknolojia dia tsy ny famantarana ny fandraisana anjaran'ny mpiasa fotsiny. Tokony hisy ny fitomboan'ny fanamarihana ataon'ny namana mifototra amin'ny fandraisan'ny mpiasa anjara andraikitra amin'ny ekipa na amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa.
Tsy misy fanontaniana hoe aiza no alehantsika 'manaraka ara-dalàna' izay no hamolavola sy hotarihin'ny tian'ny mpiasa.
Ny orinasa dia mila mampifanaraka haingana amin'ny zavatra tadiavin'ny mpiasa sy ilainy. Raha ny teo aloha dia ny mpampiasa no nametraka ny fitsipi-pitondran-tena sy ny fitsipiky ny drafitra napetrako fa ny mpiasa no hamaritra rehefa vita ny asa, ny fomba fanatanterahana azy ary ny toerana mety anaovana ny asa koa.